4 – သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
Notice: Office(21), Ministry of Science & Technology
Department of Technical and Vocational Education and Training (DTVET)
Department of Advanced Science and Technology (DAST)
Department of Biotechnology Research (DBR)
Department of Monitoring & Evaluation (DMNE)
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများ Universities, Colleges, Institutes & Schools
MoST Union Minister attends 19th ASEAN ministerial meeting on science, technology and innovation
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု ပညာသင်နှစ်၊ ဝန်ထမ်းသားသမီးများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်း ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကျော်သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ပုသိမ်၊ ဟင်္သာတ၊ မအူပင်မြို့တို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရ နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကျော်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (တောင်ငူ)သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ (Laws & Regulations)
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (Documentary Photos)
ကဏ္ဍများ (News Categories)
သတင်းမှတ်တမ်းများ (Archived News)
သတင်းမှတ်တမ်းများ (Archived News) Select Month June 2022 (5) May 2022 (4) April 2022 (7) March 2022 (5) February 2022 (4) January 2022 (8) December 2021 (6) November 2021 (5) October 2021 (3) September 2021 (3) July 2021 (2) June 2021 (1)
This Year : 32926
Total Users : 34552
Total views : 293580
Office(21), Ministry of Science and Technology
Phone : +95-67-3404521
Copyright. © 2021 All rights reserved. Ministry of Science and Technology